Ny androaniko | Aogositra 2016
[Ankapobeny ] 28 Aogositra, 2016 07:50
Vazo sy hira.
Nahita ity ohabolana ity aho dia niteny irery hoe "angaha moa zany vazo sy hira izany tsy zavatra iray ihany ?"
Dia lasa nijery rakibolana. Hay moa ny vazo ka kalom-pitiavana, hiran'ny olo-manina ?
Dia azoko ihany izany ny foto-kevitr' ilay ohabolana, fa ny nanitikitika ny saiko avy teo indray hoe "ohabolan-drazana io sa ohabolana ankehitriny ?"
[Ankapobeny ] 25 Aogositra, 2016 08:06
Ankoatran'ny setrasetran'ny zanak'olombelona mpampihorohoro dia eo koa ny tany mihorohoro, kanefa làlan'ny natiora : tanàna telo tao amin'ny faritr'i Italia afovoany (100km eo ho eo avy eto Roma) no rava tanteraka tamin'ity 24 aogositra tamin'ny 3 ora sy sasany maraina ity.
Mbola mitohy mihetsika ny tany, misy ny mbola mafimafy. Mitohy mirodana ireo sisa tavela ka maika manototra izay efa teo. Ny isa vonjimaika farany aloha androany dia 250 ny maty, 215 no voavonjy tao ambany rindrina nianjera tao.
Miondrika am-panajana eo anoloan'ireo namoy ny ainy, mirary fahasitranana sy mankahery ho an'ireo velon'aina. Miray fo tanteraka. Ary miombona alahelo amin'ilay namana malagasy namoy rafozana sy zaobavy tamin'izao loza izao.
"Voa teo amin'ny fo."
"ny saina sy ny herimpo ihany no iadiana amin'ny tahotra"
Ny tilikambon'ny fiangonana nijanona teo amin'ilay ora farany naharava ilay tanàna : tamin'ny 3 ora sy 37 minitra maraina, mbola tanaty torimaso ny ankamaroan'ny mponina.
"tanatin'ireo trano nirodana - hadiana moramora amin'ny tànana mba tsy hampianjera tanteraka ireo sisa mijoro".
"isan'ireo velon'aina na dia tena simba be aza ny trano fonenany" - ny fanevam-pirenena tsy navotsotra.
"ny fahoriana miaraka amin'ireo biby" - isam-pianakaviana ihany koa izy ireny rehefa tena tia azy.
Tantaran'i Roberta, indroa nieren-doza. Ny voalohany, 7 taona lasa izay tany L'Aquila, tanàna fonenany, ravan'ny horohorontany tamin'ny 3 ora sy 32 minitra maraina koa. Raha 6.2 tamin'ny mari-pandrefesana Richter ho herin'ilay horohorontany tao L'Aquila tamin'io 6 aprily 2009 io dia 6.0 kosa ity indray mitoraka ity.
Ny reniny no avy ao Amatrice. Ny tolakandron'ny 23 aogositra izy no tonga tao rehefa tsy nanitsaka tany nandritra ny 4 taona. Isan'ny trano tsy nirodana ny tranon-drazany - vintana sy anjara angamba hoy izy.
"ireo anjely anivon'ireo rindrina nianjera".
Ny asan''ireo mpamonjy aina : mpamonjy hain-trano, mpamonjy loza an-tendrombohitra, olon-tsotra manolo-tena hanampy amin'ny famonjena, isan'izany ireo mpitsoa-ponenana maromaro izay nahazo fialofana ao amin'iny faritra iny.
"Anjely misy rambo, ireo zavaboahary manampy ny olombelona hitady ireo aina tototra anaty rindrin-trano rava, amin'ny alalan'ny fanamboloany"
"miasa ho antsika olombelona amin'izao loza tsy roa aman-tany izao. Tsy "alika fotsiny" fa anjely."
"manavotra olona maro izy ireo. Raha mampijaly biby ianao dia tsarovy fa indray andro any mety izy no hanavotra anao"
"zazavavikely iray avotra", efa ho 36 ora taorian'ny loza. Misaotra an'i Leo, ilay anjely misy rambo miasa ho an'ny polisim-pirenena.
"Ali-nofy ratsy - rava tanteraka ny tanànan'i Accumoli, tsy lavitra an'i Amatrice, ivon'ilay horohorontany."
"Andron'ny fahanginana sy fahoriana anio. Miray fo amin'ireo niharan-doza."
"famoizam-po sy herintsaina no eny amin'ny endriky ny mponina."
"Nanampy nanala anao tao ambany rindrina nirodana fotsiny aho. Azafady raha tara izahay vao tonga, dia efa tsy niaina intsony ianao, fa tiako ho tsapanao eny ambony eny fa nanao izay azonay natao izahay namoahana anareo rehetra tao. Rehefa mody any aminay any L’Aquila aho dia haiko fa misy anjely kely mitsinjo ahy eny ambony eny, ary amin’ny alina dia ho kintana mamiratra eny ianao. Veloma Giulia na tsy fantatrao aza aho. Andrea", teny kely napetrak'ilay mpamonjy hain-trano teo amin'ny vata misy ny nofo mangatsiakan'i Giulia.
tsy ampiana teny be.
"Ny firaisana no hery."
"Indrisy, tsy tsara foana ny andro, misy ihany koa zava-mitranga manamarika antsika, manohina antsika. Ary alahelo lalim-paka no manjohy antsika eny. Fa izay "tsapantsika" izay dia midika zava-dehibe. Manana fo isika."